Iyo nyowani Nook GlowLight 3 inosvika ine yemagetsi inki skrini | Gadget nhau
Iyo nyowani Nook GlowLight 3 inosvika iine yemagetsi inki skrini
Uye ndezvekuti mhuri yeNooK yemabhuku emagetsi kubva kuBarnes & Noble, yanga isina kushamisika vanoda kuverenga kwenguva yakareba nemhando nyowani kubvira iyo GlowLight Plus yakatangwa muna 2015 uye ikozvino iyi Nook nyowani ichangoburwa. Ndiyo Nook GlowLight 3 uye yakagadziriswazve kugadzirisa zvido zvevanoda kuverenga, pakati peshanduko dzakakurumbira dzatinotaura idzva. yemagetsi ingi / yemagetsi bepa kuratidza.
Ichokwadi haina chekuita neiyo yapfuura modhi mune renji uye mune ino kesi tine mumwe 6 inch screen ine 300 ppi uye kuti inosvika yakafukidzwa zvizere kudzivirira kuratidzira, kuzvimiririra kwe anopfuura mazuva makumi mashanu kune yega yega yakazara bhatiri mutero uye zviri pachena a / b / g / n WiFi yekubatanidza, iyo inobvumidza kurodha pasi kwemabhuku kubva kunetiweki.
Zvatinotaura nezvatinojekesa nezveNook iyi nyowani ndiyo skrini. Mune ino kesi isu zvakare zvakare tine skrini isiri LCD uye yemagetsi inki isimba rayo zvakare, kuwedzera kune ino skrini inowedzera irabha furemu ine yakakomberedza bezels, ine microUSB yekubatanidza yekuchaja, haina kubatana kweBluetooth, uye haina 3,5 mm jack yehedhifoni uye inowedzera dzimwe shanduko maererano nenzvimbo yemabhatani. Nezve mabhatani aya tinofanirwa kuratidza kuti hapana bhatani rekutanga mune iyi nyowani vhezheni yeNook. Kuzvimiririra kwakanaka chaizvo uye sekutaura kwedu kunokwanisa kubata ingangoita mwedzi miviri pasina kuda kuvezwa.
Panyama icho chakasiyana uye iyo kambani inotarisa yakanangana pachiratidziri patinotaura nezve shanduko pamusoro peiyo yapfuura vhezheni, iine husiku modhi iyo inowedzera iyo orenji toni yekudzivirira maziso edu inoita kuti ive yakanaka shamwari yekuverenga kwenguva refu. pre-sale yatovhurwa mu Barnes & Noble webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Iyo nyowani Nook GlowLight 3 inosvika iine yemagetsi inki skrini
Haasi ese akanaka nhau mune inotevera yekuvandudza yeGoogle Play Chitoro
Iwo maSpanish anofambisa ane kukosha kwakanyanya kwemari